Firenena Arabo : “Inona no tena tsara ho fantatra ?” – Gasy Egypte
Firenena Arabo : “Inona no tena tsara ho fantatra ?”
“Maro no mieritreritra indrindra fa ny Malagasy fa rehefa “tany arabo” dia ratsy avokoa, feno jadona sy mijaly ny mpivahiny any amin’izany firenena izany… Mila fantarina tsara anefa ilay firenena sy ny mponina ao aminy ary indrindra ny kolo-tsainan’izy ireo sy ny fomba amam-panaony.”
Nanomboka ny taona 2013 dia namoaka lalàna ny fanjakana Malagasy nandràra ny fandefasana teratany Malagasy indrindra ireo mikasa ny hiasa any amin’ny firenana arabo toa an’I : Arabie Saoudite, Koweit, Liban, Dubai… Avy dia nitsara ny tsirairay fa tsy azo aleha ary tena ratsy avokoa izany ireo firenena ireo. Tsy azo lavina fa nisy tokoa ireo namoy ny ainy, niaran’ny herisetra raha niasa tamin’ireo firenena ireo ka izany no isany nandraisana fepetra. Nefa tiana ahitsy ihany koa ny fomba fijery indrindra ho antsika Malagasy fa tsy voatery ho ratsy ny miaina sy mivahiny any amin’ireo firenena ireo.
Ny voalohany tsara ho fantatra dia anisan’ny firenena tena mandroso ary tena manan-karena ireo firenena ireo, izany hoe miroborobo fatratra ara-ekonomika (toe-karena). Ohatra fotsiny izao I Koweit dia anisan’ny firenena manana ny sandam-bola ambony dia ambony maneran-tany ary tsy mba nitrosa izany mihintsy hahatsara ny kitampom-bolam-panjakana. Manana ny tantarany, ny finoany, ny fomba amam-panaony sy ny kolo-tsainy (Histoire, Coutûme, Culture, Foi et Religion) izy ireo. Eto indrindra no mampiavaka azy ireo tsirairay avy ary tena mila mandalina sy mamakafaka tsara fa tsy hitovy an’I Madagasikara na ireo firenena hafa mihintsy eo amin’ny fototry ny fomba fisainan’ny mponina, ny fitondrana misy (mety ho mbola mpanjaka ohatra tahaka an’I Arabie Saoudite) ary ny lalàna miatra ao amin’ilay firenena.
Ireto avy ary ny tena tsara ho fantatra mahakasika ny firenena Arabo raha amin’ny ankapobeny:
Ny teny ampiasaina: Ny teny arabo mazava ho azy, manaraka izany ny teny anglisy. Arak’izany dia tena vitsy dia vitsy na tsy misy mihintsy aza ny mampiasa ny teny frantsay any amin’ireo firenena ireo.
Ny resaka finoana: sarotiny nohon’ny fitiavan’izy ireo ny finoany sy ny fanajany izany ny firenena arabo, ny ankamaroany moa dia silamo (musulman). Misy fa saingy vitsy ny manana finoana hafa ohatra hoe kristianina. Manan-danja lehibe ny finoana sy ny fivavahana any amin’ireo firenena ireo.
Ny fomba fitafy indrindra moa fa ho an’ny vehivavy, tsy toa an’I Madagasikara na ihany koa any Eoropa ny fahalalahana amin’izay akanjo tiana anaovana rehefa hivoaka ny trano. Tsy misy lalàna koa anefa mamaritra izany fa ny fanajana ilay fomba ao amin’ilay firenena no tena antony lehibe. Sarotra araka izany ny ahita vehivahy manao zipo fohy ohatra raha eny rehetra eny.
Tsy mahantra ary tsy mitamby fampindramam-bola amin’ireo firenena lehibe izy ireo satria anisan’ny firenena manana ny maha izy azy eo amin’ny lafiny toe-karena. Manana sehatr’asa azo trandrahina sy misokatra ho an’ny firenena maro izy ireo saingy kosa ny lalàna misy sy ireo fomba amam-panao rehetra ireo dia anisan’ny mahasarotiny azy ireo raha tsy voahaja. Na ny mponina ao amin’ny firenena tsirairay aza tezaina hitia sy hanaja ny kolo-tsaina sy ireo fomba amam-panao ireo dia rariny loatra raha manao toy izany koa ireo vahiny.
Tena tsotra ary azo tanterahina tsara ny fivahinianana any amin’ireo firenena arabo, mila fifanajana na ilay antsoina hoe “respect mutuel” no tena fototra hampizotra sy am-pilamina tsara izany. Tiako tsindrina fotsiny fa tsy voatery hanaraka na hivadika amin’ny finoana, fa ilay fanajana no tena ilaina. Ny tena irariana aza dia ny mba hananan’I Madagasikara fiaraha-miasa akaiky amin’ireo firenena ireo amin’ny tetik’asa fampandrosoana, ary izany dia manomboka amin’ny fametrahana masoivoho (Ambassade ou Consulat).
Quel dirigeant pour Madagascar ?
Le Souq d`Ataba (le Bazar)
5 Thoughts to “Firenena Arabo : “Inona no tena tsara ho fantatra ?””
Forum Cialis En Pharmacie Propecia Preparacion Propecia Dose cialis 5mg Isotretinoin Discount Will Amoxicillin Heal Tooth Abscess
Amoxicillin Suspension Cialis Prix Maroc Vente Levitra levitra 10mg compatible Flushed Face With Keflex Antibiotic
Stendra 50mg Erectile Dysfunction Exeter Propecia Once A Week Viagra Barata Espana viagra prescription Viagra 50 Mg Price Walmart
Priligy Dauer Cialis Viagra Comparatif buy levitra Viagra Precio Farmacia
Ou Trouver Cialis Sur Le Net Cialis Authentique Ligne where to buy cialis online safely Propecia 5 Mg Effetti Collaterali
Leave a Reply to Jeaannera Cancel reply